21 Sep 2018 . 12:37 PM
Tom Hanks နဲ့ Forrest Gump (1994) ဟာ ခွဲခြားလို့မရပါဘူး။ မင်းသားကြီး Tom Hanks ရဲ့ဇာတ်ကားကောင်းတွေကို ပြောရရင် Forrest Gump (1994) တစ်ခုတည်း မဟုတ်ပြန်ပါဘူး။ Big (1989) ၊ Philadelphia (1993) ၊ Forrest Gump (1994) ၊ Apollo 13 (1995) ၊ Toy Story 1- 2-3၊ Saving Private Ryan (1998) ၊ You’ve Got A Mail (1998) ၊ The Green Miles (1999) ၊ Cast Away (2000) ၊ Catch Me If U Can (2002) ၊ Lady Killer (2004) ၊ The Terminal (2004) နဲ့ The Polar Express (2004) ၊ The Da Vin Ci Code (2006) ၊ Angels And Demons (2009) ၊ Captain Phillips (2013) နဲ့ The Post (2017) ဇာတ်ကားတွေဟာ ပရိသတ်ရင်ကို ဆွဲလှုပ်ခဲ့ပါတယ်။
သဘာဝမင်းသားကြီးပီပီ ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် ‘Philadelphia (1993)’ နဲ့ ‘Forrest Gump (1994)’ ဇာတ်ကားတွေမှာ အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု (Academy Award for Best Actor) ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အခုတစ်ပတ်မှာတော့ မင်းသားကြီး Tom Hanks ရဲ့ အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင် (၅) ကားကို ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။
(၅) Splash (1984)
Tom Hanks ရဲ့အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ထဲမှာ Splash (1984) ကို မေ့ထားလို့ မရပါဘူး။ အသည်းကွဲပြီး ပင်လယ်ဘက်ကို ထွက်လာတဲ့ Allen Bauer (Tom Hanks) ဟာ စက်လှေပျက်ပြီး ရေထဲထိုးကျသွားခဲ့ပါတယ်။ ရေသူမလေး Madison (Daryl Hannah) က ကယ်ဆယ်ရင်းကနေ ချစ်သူဖြစ်သွားတဲ့ ဇာတ်ကားပါ။ Tom Hanks ရဲ့ နုပျိုမှုကို အထင်းသားမြင်နိုင်တဲ့ အချစ်ဟာသဇာတ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ နည်းပညာအထူးပြုလုပ်ချက်တွေ မထွန်းကားသေတဲ့အချိန်မှာ ရိုက်ကူးထားပေမယ့် အခုထက်ထိ ခေတ်မီနေပါသေးတယ်။
(၄) Philadelphia (1993)
Andrew Beckett (Tom Hanks) ဟာ နာမည်ကျော်ရှေ့နေတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ လိင်တူချစ်သူတစ်ယောက်ဆိုပေမယ့် လိင်တိမ်းညွှတ်မှုနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ကို ခွဲခြားနိုင်ပြီး ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စိတ်ပြည့်ဝသူပါ။ နောက်တော့ သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာ ရေယုန်တွေ ပေါက်လာပါတယ်။
အဲဒီခေတ်တုန်းက AIDS ရောဂါဟာ အမေရိကန်တစ်ခွင်မှာ ခေတ်စားနေတဲ့အချိန်ဖြစ်နေပါတယ်။ ရောဂါဖြစ်နေတဲ့ သူ့ကို အလုပ်က ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Andrew Beckett (Tom Hanks) ဟာ ကုမ္ပဏီကို တရားစွဲဆိုတဲ့ အထိကိုဖြစ်လာပါတယ်။ သူ့ဘက်ကို ဘယ်သူမှ ရှေ့နေလိုက်မပေးချင်ကြဘဲ ပြိုင်ဘက်ဖြစ်သူ Joe Miller (Denzel Washington) ကို ငှားရပါတော့တယ်။ တရားခွင်မှာ အနိုင်ရမလား၊ ရှုံးနိမ့်မှာလား။ အနိုင်ရတဲ့အချိန်ထိ Andrew Beckett (Tom Hanks) ဟာ အသက်ရှင်ဦးမလား။ ဒီဇာတ်ကားကြီးဟာ ၁၉၉၃ခုနှစ်မှာ အကောင်းဆုံးစာရင်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။
(၃) Forrest Gump (1994)
Tom Hanks လို့ပြောလိုက်ရင် မြန်မာပရိသတ်တွေက ‘Forrest Gump’ ဇာတ်ကောင်ကိုပဲ ပြေးမြင်မိကြပါတယ်။ ‘Run, Forrest run’ ဆိုတဲ့ အသံစာစာလေးရဲ့နောက်ကွယ်မှာ တဟုန်ထိုးပြေးလွှားနေတဲ့ သူ့ရဲ့သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကလည်း အော်စကာဆုနဲ့ ထိုက်တန်ပါပေတယ်။ ဒီဇာတ်ကားမှာက မိဘမေတ္တာကို အထင်းသားဖော်ပြနိုင်ရုံမက စိတ်သဘောကောင်းတဲ့လူဟာ ဘယ်တော့မှ ဒုက္ခမရောက်ဖူးဆိုတဲ့ နိယာမကိုလည်း သိစေပါတယ်။
(၂) Toy Story (1995)
Toy Story (1995) ဆိုတာ စွန့်စားခန်းအမျိုးအစား ကာတွန်းဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ Andy Davis ဆိုတဲ့ ခြောက်နှစ်သား ကောင်လေးဟာ အရုပ်တွေအများကြီးပိုင်တယ်။ အဲဒီအထဲကမှ Woody ဆိုတဲ့ နွားကျောင်းသားအရုပ်လေးကိုတော့ သူ အကြိုက်ဆုံး။ အရုပ်တွေအသက်ဝင်လာပြီး စွန့်စားခန်းတွေကို ကြည့်ရှုရမှာပါ။ Woody ဇာတ်ကောင်ကို မင်းသားကြီး Tom Hanks က အသံနဲ့ သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ အခုချိန်ထိ ကြည့်လို့မရိုးနိုင်တဲ့ ကာတွန်းကားပါ။
(၁) Saving Private Ryan (1998)
ဒီစာရင်းမှာ Forrest Gump (1994) က နံပါတ် (၁) မဟုတ်ဘဲ Saving Private Ryan (1998) ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နောက်ခံ မေတ္တာဖွဲ့ ရုပ်ရှင်ကြီးဖြစ်ပြီး မင်းသားကြီး Tom Hanks အပြင် Matt Damon ၊ Vin Diesel ၊ Edward Burns နဲ့ Tom Sizemore တို့က အားဖြည့်ထားပါတယ်။ အမျိုးသမီးကြီးတစ်ဦးဟာ သားလေးယောက် မွေးထားတယ်။
အကုန်လုံးက စစ်သားတွေချည်းပဲ။ သုံးယောက်က တိုက်ပွဲကျသွားတယ်။ မိဘမေတ္တာကို စာနာတဲ့အနေနဲ့ စစ်ပွဲမှာ အသက်ရှင်ကျန်သေးတဲ့ တပ်သား Ryan (Matt Damon) ကို ကယ်ဆယ်ဖို့ ဗိုလ်ချုပ် George Marshall (Harve Presnell) က ဗိုလ်ကြီး Miller (Tom Hanks) ကို တာဝန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကောက်ရိုးပုံထဲ အပ်ပျောက်ရှာရသလို ခက်ခဲတဲ့ စစ်မြေပြင်မှာ တပ်သားလေးကို တွေ့ပါ့မလား ရင်တမောမောနဲ့ ကြည့်ရမှာပါ။
Business Insider အဖွဲ့ ရဲ့ ရုပ်ရှင်သုံးသပ်သူတွေအကြိုက် Tom Hanks ရဲ့ အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင် (၅) ကားကို တင်ပြလိုက်တာပါ။ ဒီစာရင်းမှာ The Green Miles (1999) ၊ Cast Away (2000) ၊ Catch Me If U Can (2002) ၊ The Terminal (2004) နဲ့ Captain Phillips (2013) တို့လို ဇာတ်ကားကောင်းတွေ မပါဘဲ Splash (1984) ပဲ ပါနေတဲ့အတွက် ရုပ်ရှင်ချစ်သူတွေက စောဒကတက်ကောင်း တက်နိုင်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးရော Tom Hanks ရဲ့ အကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင်ကို ဝေမျှပေးပါလား။
ဂန်ထဝငျမငျးသားကွီး Tom Hanks ရဲ့ အကောငျးဆုံးရုပျရှငျ (၅) ကား
Tom Hanks နဲ့ Forrest Gump (1994) ဟာ ခှဲခွားလို့မရပါဘူး။ မငျးသားကွီး Tom Hanks ရဲ့ဇာတျကားကောငျးတှကေို ပွောရရငျ Forrest Gump (1994) တဈခုတညျး မဟုတျပွနျပါဘူး။ Big (1989) ၊ Philadelphia (1993) ၊ Forrest Gump (1994) ၊ Apollo 13 (1995) ၊ Toy Story 1- 2-3၊ Saving Private Ryan (1998) ၊ You’ve Got A Mail (1998) ၊ The Green Miles (1999) ၊ Cast Away (2000) ၊ Catch Me If U Can (2002) ၊ Lady Killer (2004) ၊ The Terminal (2004) နဲ့ The Polar Express (2004) ၊ The Da Vin Ci Code (2006) ၊ Angels And Demons (2009) ၊ Captain Phillips (2013) နဲ့ The Post (2017) ဇာတျကားတှဟော ပရိသတျရငျကို ဆှဲလှုပျခဲ့ပါတယျ။
သဘာဝမငျးသားကွီးပီပီ ကရြာဇာတျရုပျကို ပီပွငျအောငျ သရုပျဆောငျနိုငျခဲ့တဲ့အတှကျ ‘Philadelphia (1993)’ နဲ့ ‘Forrest Gump (1994)’ ဇာတျကားတှမှော အကောငျးဆုံးအမြိုးသားဇာတျဆောငျဆု (Academy Award for Best Actor) ရရှိခဲ့ပါတယျ။ အခုတဈပတျမှာတော့ မငျးသားကွီး Tom Hanks ရဲ့ အကောငျးဆုံးရုပျရှငျ (၅) ကားကို ဖျောပွလိုကျရပါတယျ။
Tom Hanks ရဲ့အကောငျးဆုံးရုပျရှငျထဲမှာ Splash (1984) ကို မထေ့ားလို့ မရပါဘူး။ အသညျးကှဲပွီး ပငျလယျဘကျကို ထှကျလာတဲ့ Allen Bauer (Tom Hanks) ဟာ စကျလှပေကျြပွီး ရထေဲထိုးကသြှားခဲ့ပါတယျ။ ရသေူမလေး Madison (Daryl Hannah) က ကယျဆယျရငျးကနေ ခဈြသူဖွဈသှားတဲ့ ဇာတျကားပါ။ Tom Hanks ရဲ့ နုပြိုမှုကို အထငျးသားမွငျနိုငျတဲ့ အခဈြဟာသဇာတျကားပဲဖွဈပါတယျ။ နညျးပညာအထူးပွုလုပျခကျြတှေ မထှနျးကားသတေဲ့အခြိနျမှာ ရိုကျကူးထားပမေယျ့ အခုထကျထိ ခတျေမီနပေါသေးတယျ။
Andrew Beckett (Tom Hanks) ဟာ နာမညျကြျောရှနေ့တေဈယောကျဖွဈပါတယျ။ လိငျတူခဈြသူတဈယောကျဆိုပမေယျ့ လိငျတိမျးညှတျမှုနဲ့ လုပျငနျးခှငျကို ခှဲခွားနိုငျပွီး ပရျောဖကျရှငျနယျစိတျပွညျ့ဝသူပါ။ နောကျတော့ သူ့ကိုယျပျေါမှာ ရယေုနျတှေ ပေါကျလာပါတယျ။
အဲဒီခတျေတုနျးက AIDS ရောဂါဟာ အမရေိကနျတဈခှငျမှာ ခတျေစားနတေဲ့အခြိနျဖွဈနပေါတယျ။ ရောဂါဖွဈနတေဲ့ သူ့ကို အလုပျက ထုတျလိုကျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ Andrew Beckett (Tom Hanks) ဟာ ကုမ်ပဏီကို တရားစှဲဆိုတဲ့ အထိကိုဖွဈလာပါတယျ။ သူ့ဘကျကို ဘယျသူမှ ရှနေ့လေိုကျမပေးခငျြကွဘဲ ပွိုငျဘကျဖွဈသူ Joe Miller (Denzel Washington) ကို ငှားရပါတော့တယျ။ တရားခှငျမှာ အနိုငျရမလား၊ ရှုံးနိမျ့မှာလား။ အနိုငျရတဲ့အခြိနျထိ Andrew Beckett (Tom Hanks) ဟာ အသကျရှငျဦးမလား။ ဒီဇာတျကားကွီးဟာ ၁၉၉၃ခုနှဈမှာ အကောငျးဆုံးစာရငျးဝငျခဲ့ပါတယျ။
Tom Hanks လို့ပွောလိုကျရငျ မွနျမာပရိသတျတှကေ ‘Forrest Gump’ ဇာတျကောငျကိုပဲ ပွေးမွငျမိကွပါတယျ။ ‘Run, Forrest run’ ဆိုတဲ့ အသံစာစာလေးရဲ့နောကျကှယျမှာ တဟုနျထိုးပွေးလှားနတေဲ့ သူ့ရဲ့သရုပျဆောငျခကျြတှကေလညျး အျောစကာဆုနဲ့ ထိုကျတနျပါပတေယျ။ ဒီဇာတျကားမှာက မိဘမတ်ေတာကို အထငျးသားဖျောပွနိုငျရုံမက စိတျသဘောကောငျးတဲ့လူဟာ ဘယျတော့မှ ဒုက်ခမရောကျဖူးဆိုတဲ့ နိယာမကိုလညျး သိစပေါတယျ။
Toy Story (1995) ဆိုတာ စှနျ့စားခနျးအမြိုးအစား ကာတှနျးဇာတျကားဖွဈပါတယျ။ Andy Davis ဆိုတဲ့ ခွောကျနှဈသား ကောငျလေးဟာ အရုပျတှအေမြားကွီးပိုငျတယျ။ အဲဒီအထဲကမှ Woody ဆိုတဲ့ နှားကြောငျးသားအရုပျလေးကိုတော့ သူ အကွိုကျဆုံး။ အရုပျတှအေသကျဝငျလာပွီး စှနျ့စားခနျးတှကေို ကွညျ့ရှုရမှာပါ။ Woody ဇာတျကောငျကို မငျးသားကွီး Tom Hanks က အသံနဲ့ သရုပျဆောငျထားပါတယျ။ အခုခြိနျထိ ကွညျ့လို့မရိုးနိုငျတဲ့ ကာတှနျးကားပါ။
ဒီစာရငျးမှာ Forrest Gump (1994) က နံပါတျ (၁) မဟုတျဘဲ Saving Private Ryan (1998) ဖွဈနပေါတယျ။ ဒုတိယကမ်ဘာစဈနောကျခံ မတ်ေတာဖှဲ့ ရုပျရှငျကွီးဖွဈပွီး မငျးသားကွီး Tom Hanks အပွငျ Matt Damon ၊ Vin Diesel ၊ Edward Burns နဲ့ Tom Sizemore တို့က အားဖွညျ့ထားပါတယျ။ အမြိုးသမီးကွီးတဈဦးဟာ သားလေးယောကျ မှေးထားတယျ။
အကုနျလုံးက စဈသားတှခေညျြးပဲ။ သုံးယောကျက တိုကျပှဲကသြှားတယျ။ မိဘမတ်ေတာကို စာနာတဲ့အနနေဲ့ စဈပှဲမှာ အသကျရှငျကနျြသေးတဲ့ တပျသား Ryan (Matt Damon) ကို ကယျဆယျဖို့ ဗိုလျခြုပျ George Marshall (Harve Presnell) က ဗိုလျကွီး Miller (Tom Hanks) ကို တာဝနျပေးလိုကျပါတယျ။ ကောကျရိုးပုံထဲ အပျပြောကျရှာရသလို ခကျခဲတဲ့ စဈမွပွေငျမှာ တပျသားလေးကို တှပေ့ါ့မလား ရငျတမောမောနဲ့ ကွညျ့ရမှာပါ။
Business Insider အဖှဲ့ ရဲ့ ရုပျရှငျသုံးသပျသူတှအေကွိုကျ Tom Hanks ရဲ့ အကောငျးဆုံးရုပျရှငျ (၅) ကားကို တငျပွလိုကျတာပါ။ ဒီစာရငျးမှာ The Green Miles (1999) ၊ Cast Away (2000) ၊ Catch Me If U Can (2002) ၊ The Terminal (2004) နဲ့ Captain Phillips (2013) တို့လို ဇာတျကားကောငျးတှေ မပါဘဲ Splash (1984) ပဲ ပါနတေဲ့အတှကျ ရုပျရှငျခဈြသူတှကေ စောဒကတကျကောငျး တကျနိုငျပါတယျ။ ပရိသတျကွီးရော Tom Hanks ရဲ့ အကွိုကျဆုံးရုပျရှငျကို ဝမြှေပေးပါလား။
by Htet Htet . 1 month ago
Galaxy M20 ကို ခေတ်အောက်နေတဲ့ Display ၊ MP နိမ့်တဲ့ဖုန်းဆိုပြီး ခနဲ့လိုက်တဲ့ Xiaomi